SARUDZA MUTAURO Abbey Afrikaans Amharic Armenian Attié Baoule Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiTetun Dili Chichewa Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chopi Chuabo Cibemba Croatian Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Ga Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Korean Kwanyama Lunda Luo Macedonian Mahorian (Roman) Malay Mapudungun Miskito Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPanama Ndebele (Zimbabwe) Niuean Nzema Oromo Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Russian Serbian Setswana Shona Sidama Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Thai Tigrinya Tiv Tongan Tsonga Turkmen Tuvaluan Urhobo Uruund Uzbek Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zulu
Isu tose tine chisarudzo. Tinobatira Jehovha kana kuti zvimwe tinobatira Satani namadhemoni ake. Hatigoni kuita zvose zviri zviviri. Kuchenjera sei kubatira Jehovha!
Sezvataona, madhemoni anofarikanya kukuvadza nokunyengedza vanhu. Jehovha haana kudaro. Iye anoda rudzi rwomunhu sababa vanoda vana vavo. Iye ndiye Mupi we“chipo chiri chose chakanaka nechipiwa chiri chose chakakwana.” (Jakobho 1:17) Iye haanyimi chinhu chakanaka rudzi rwomunhu, kunyange pakurasikirwa kukuru kwake amene.​—VaEfeso 2:4-7.
Jesu, Mwanakomana waMwari, akaratidza rudo nokuda kwavanhu kupfurikidza nokuporesa zvirwere zvavo
Funga pamusoro pezvinhu zvakaitwa pasi pano naJesu, Mwanakomana waMwari. Akaita kuti mbeveve dzitaure uye akasvinudza mapofu. Akaporesa vanhu vane maperembudzi navanokamhina. Akadzinga madhemoni uye akarapa marudzi ose echirwere. Jesu, kupfurikidza nesimba raMwari, akatomutsira vakafa kuupenyu.​—Mateo 9:32-35; 15:30, 31; Ruka 7:11-15.
Panzvimbo pokutaura nhema dzokutitsausa, Mwari nguva dzose anotaura zvokwadi. Haatongonyengedzi munhu upi noupi.​—Numeri 23:19.
Dzivisa Miitiro Isina Kuchena
Kungofanana nedandemutande rinobatisisa nhunzi, mamirioni avanhu vanobatisiswa nokudavira mashura nenhema. Vanotya vakafa. Vanotya madhemoni. Vanonetseka pamusoro peshurikidzo, mashura, madumwa, uye mazango. Vanosungwa nezvitendero uye magamuchidzanwa akavakirwa panhema dzaSatani Dhiabhorosi. Vabatiri vaMwari havasungwi mumusungo nechimwe cheizvi zvinhu.
Jehovha ane simba zvikuru kupfuura Satani. Kana ukabatira Jehovha, achakudzivirira pamadhemoni. (Jakobho 4:7) Zvitsinga hazvisati zvichizoshanda pauri. Somuenzaniso, muNigeria, n’anga nhatu dzine simba dzakatsinga kuti dziuraye Chapupu chaJehovha icho chakaramba kubva mutaundi. Apo zvitsinga zvakakundikana, mumwe wen’anga dzacho akatya, akaenda kuChapupu chacho, ndokukumbira ngoni.
VaEfeso vakapisa mabhuku avo ezvamashiripiti
Kana madhemoni akakutambudza, unogona kudana pana Jehovha nezita uye iye achakudzivirira. (Zvirevo 18:10) Asi kuti iwe uve nedziviriro yaMwari, unofanira kurega chose chose chinhu chiri chose chakabatana nokutaura nemidzimu nokunamata madhemoni. Vanamati vaMwari vomuEfeso yekare vakaita izvozvo. Vakaunganidza mabhuku avo ose ezvamashiripiti ndokuapisa. (Mabasa 19:19, 20) Vabatiri vaMwari nhasi vanofanira kuita zvimwe chetezvo. Zvibvise umene matumwa, mishonga yokudzivirira uroyi, mitimwi “yokupinga”, mazango, mabhuku amashiripiti, uye chinhu chipi nechipi zvacho chine chokuita nemiitiro yokutaura nemidzimu.
Shandisa Kunamata Kwechokwadi
Kana uchida kufadza Mwari, hakuna kukwana kungosiya bedzi kunamata kwenhema uye kurega kuita zvinhu zvakashata. Unofanira kushandisa nomutoo wokushingaira kunamata kwakachena. Bhaibheri rinoratidza chiri chinodikanwa:
Pinda misangano yechiKristu.​—VaHebheru 10:24, 25
Funda Bhaibheri.​—Johane 17:3
Paridza kuna vamwe.​—Mateo 24:14
Nyengetera kuna Jehovha.​—VaFiripi 4:6, 7
Songanirana neZvapupu zvaJehovha
Satani namadhemoni ake vane vanhu pasi pano vanodzidzisa uye vanoshandisa zvinhu zvisina kururama. Asi Jehovha anewo vanhu. Ivo Zvapupu zvaJehovha. (Isaya 43:10) Mupasi rose, mune zvinopfuura Zvapupu zvine mamirioni mana. Izvo zvose zvinoedza zvakasimba kuita zvinhu zvakanaka uye zvinodzidzisa vanhu zvokwadi. Munyika zhinjisa, unogona kusangana nazvo paHoro yoUmambo, uko izvo zvichakugamuchira noushamwari.
Basa razvo nderokubetsera vamwe kubatira Mwari. Izvo zvichafunda Bhaibheri newe mumusha mako, zvichikubetsera kudzidza mutoo wokunamata nawo Jehovha nenzira yakarurama. Haufaniri hako kuripira nokuda kwaikoku. Zvapupu zvinofara kudzidzisa zvokwadi nokuti zvinoda vanhu uye zvinoda Jehovha Mwari.
Zvapupu zvaJehovha zvichakubetsera kubatira Mwari